२६ पुस, काठमाडौं । दसैँ मनाउन अमेरिकाबाट नेपाल आएका ललितपुरका आईटी प्राविधिक उमेश केसी आगामी बिहीबार अमेरिका फर्किदै थिए । अघिल्लो साता कुनै अप्रिय घटना नभएको भए उनी अमेरिका जाने तयारीमा हुन्थे ।
बिहीबार अमेरिका फर्कने टिकट हातमा लिएका केसीको मृत शरीर फेला परेको छ । अष्टमीबाट टोखा नगरपालिका–३ मा रहेको ग्रिनभिला हाउजिङमा श्रीमती सुदिक्षा गिरीसहित बसिरहेका उनी गत शुक्रबार राति पानै ९ बजे कोठामै मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।
श्रीमती गिरी चाहिँ कोठाको बाहिरपट्टी फलामको रेलिङमा सेतो सलको पासोमा झुण्डिइरहेको अवस्थामा भेटिएकी छन् । काठमाडौं प्रहरी प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह भन्छन्, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले श्रीमती सुदिक्षाले केसीको हत्या गरी आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आधारहरू देखिएका छन् ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा गरिएको पोष्टमार्टमले पनि त्यसैलाई बल पुर्‍याउने गरी प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएको उनी बताउँछन् । तर, सुदिक्षाकी दिदी उर्मिलाको भूमिकाले घटनालाई रहस्यमय बनाइदिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरू बताउँछन् । अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार उमेश र सुदिक्षाको शव पहिलो पटक उर्मिलाले देखेकी थिइन् ।
पैदल हिँडेर करिब ५ मिनेट लाग्ने दूरीमा बस्ने उनी शुक्रबार बिहान करिब ६ बजेतिर सुदिक्षालाई खोज्दै हाउजिङमा आएकी थिइन् । अघिल्लो दिनबाटै पटकपटक फोन गर्दा पनि नउठाएपछि खोज्दै आएको उनले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी छन् ।
उर्मिलाका अनुसार घरमा पुग्दा अगाडि पट्टी ढोका बन्द थियो । पछाडिबाट हात छिराएर खोल्न मिल्ने चुकुल थियो, जुन अन्य वेला पनि उनले प्रयोग गर्ने गरेकी थिइन् । त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरेपछि उनले बहिनी सुदिक्षाको शव झुण्डिरहेको अवस्थामा देखिइन् । कोठामा ज्वाइँ उमेश पनि लडिरहेका थिए ।
विभत्स घटना देखेपछि पनि उनले प्रहरीलाई भने खबर गरिनन् । मृतक उमेशका दाइ हिमेश केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘घटनालगत्तै प्रहरीलाई किन भनिएन ? हामीलाई किन खबर गरिएन ? यसले शंका गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ ।’
हिमेशका अनुसार प्रहरीलाई खबर गर्नु साटो अमेरिकामा भएका आफन्तलाई उर्मिलाले फोनमार्फत खबर गरेकी थिइन् । अमेरिकामा पुगेको सूचना रिले हुँदै सोही हाउजिङमा रहेका अवकाश प्राप्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भविन्द्र मल्लसम्म पुगेपछि उनैले प्रहरी कन्ट्रोल १०० मा घटनाबारे जानकारी टिपाएका थिए ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको कन्ट्रोलले ८ः४५ मा पूर्वएसपी मल्लले पठाएको सूचना काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह, महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्का लगायतलाई फरवार्ड गर्‍यो । पाँच मिनेटमा खड्काको नेतृत्वमा १५ जनाको टोली साढे दुई किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको अपराधस्थलमा पुगेको प्रहरी प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
त्यसपछि बल्ल घटनास्थलको मुचुल्का, शवको जाँच लगायतका प्रक्रिया सुरु भएको देखिएको छ । हिमेशको प्रश्न छ, ‘बिहान थाहा पाएको घटनाबारे १२ घन्टाभन्दा बढी किन कसैलाई खबर गरिएन ?’
फेरि प्रहरीले पनि केटा पक्षको व्यक्ति नभेटिएको भन्दै हतारहतार शव उठाउनु पनि शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू पनि उर्मिलालाई छानविनको दायरामा राखिए पनि हालसम्म शंकास्पद विषय सतहमा नआएको बताउँछन् ।
बरु उनले घटना देखेपछि हतास अवस्थामा आफूले के गर्ने सोच्नै नसकेको बयान दिएको भनिएको छ ।
भारी चिजले हिर्काएका कारण लागेको चोटका कारण भएको उच्च रक्तश्रावले उमेशको मृत्यु – पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक
उमेश हत्याको १२ घन्टापछि आत्महत्या
काठमाडौं प्रहरीका डीएसपी प्रमिस विष्टका अनुसार घटनास्थल नजिकै लगत लत्पतिएको सिलौटा बरामद भएको छ । त्यही सिलौटा प्रहार गरी उमेशको हत्या भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक आशंका रहेको उनी बताउँछन् । सुतिरहेका वेला कुनै विवाद समेत नभइ सिलौटा हिर्काइएको हुनसक्ने वस्तुस्थितिले देखाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको पोष्टमार्टमले पनि सिलौटा प्रहार गरी हत्या भएको हुनसक्ने दाबीलाई बल पुर्‍याउने गरी प्रारिम्भक रिपोर्ट दिएको छ । चिकित्सकहरूले प्रहरीलाई भनेका छन्, ‘डेथ ड्यू टु ब्लन्ट फोर्स इन्ज्युरी एण्ड ओभरब्लिडिङ ।’ अर्थात्, भारी चिजले हिर्काएका कारण लागेको चोटका कारण भएको उच्च रक्तश्रावका कारण मृत्यु ।
घटनामा केसीको बायाँ पट्टीको टाउको फ्याक्चर भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
उनको शरीरको अन्य भागमा कुनै पनि चोटपटक देखिएको छैन । चिकित्सकलाई उदृध गर्दै प्रहरीले बताएअनुसार उमेशको हत्या भएको करिब १२ घन्टापछि मात्रै सुदिक्षाको मृत्यु भएको छ ।
उनको घाँटीमा सलको ‘लिगेचर मार्क’बाहेक अन्य कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यसैले सुदिक्षाले उमेशको हत्यापछि आत्महत्या गरेको हुनसक्ने भनिएको छ । कोठामा अन्य व्यक्तिको पनि उपस्थिति नदेखिनुले यसलाई बल पुर्‍याएको भनिएको छ ।
अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकृतहरूको बाक्लो बसोबास रहेको उमेश र सुदिक्षा बस्ने कोलोनीमा आउने जाने व्यक्तिको विवरण पहिल्यै राखेर सोधपुछपछि मात्र जान दिने गरिन्छ । प्रहरीले कोलोनीका सुरक्षागार्ड नवलपरासीका बुद्धिबहादुरसँग लिएको बयानबाट पनि उनीहरूको घरमा घटना भएको आसपासको समयमा अन्य व्यक्ति गएको देखिँदैन ।
पारिवारिक खटपटको आशंका
अपराधका दुवै पक्षको मृत्यु भइसकेकाले घटनाको यकिन कारण पत्ता लगाउन प्रहरीलाई गाह्रो छ । तर, अहिले प्रहरी दुवै जनाको मोबाइल फोन विश्लेषणतिर जुटेको छ । लक गरिएको मोबाइल फोन अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ ।
प्रारिम्भक सोधपुछले भने सुदिक्षा र उमेशबीच पारिवारिक खटपट रहेको हुनसक्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको प्रहरीले जनाएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार दुई जनाको ६ वर्ष अघि प्रेम विवाह भएको थियो र परिवारले नरुचाएका कारण सुदिक्षा बेग्लै बस्दै आएकी थिइन् । उनी टोखामा रहेका माइती छेऊमै बस्दै आएकी थिइन् ।
हालै अमेरिकाको ग्रिन कार्ड प्राप्त गरेका उमेशले सुदिक्षालाई पनि उतै लैजाने प्रक्रिया थालिसकेका थिए । तर, यसबीचमा के घटना भयो, जसले जघन्य अपराधलाई जन्म दियो भन्ने विषय रहस्यकै गर्भमा छ ।
Categories Select Category Auto (826) Blog (3) English (1,399) Entertainment (928) Finance (1,941) Nepali (20,402) Sports (13,397) Tech (3,519) World (5,850)